Knowledge – Page4– Wun Yan
မကာအိုက သူဌေးကြီး ရန်ကုန်လာတာ တီရှပ်ဝတ်ပြီး ပလပ်စတစ်အိတ်ပဲ ဆွဲလာတာတဲ့
မကာအိုက သူဌေးကြီး ရန်ကုန်လာတာ တီရှပ်ဝတ်ပြီး ပလပ်စတစ်အိတ်ပဲ ဆွဲလာတာတဲ့ ပြည့်တဲ့အိုး ဟောင်ကောင်-ရန်ကုန် ဖလိုက်ရဲ့ Business Class မှာ ရှားရှားပါးပါး ခရီးသည်တယောက်ထဲ လိုက်ပါလာတယ်။ တရုတ်လူမျိုး အသက်ကြီးကြီး… အဝတ်အစားက သာမန်ကာလျှံကာ… တီရှပ်မွဲမွဲနဲ့ ပိတ်ဘောင်းဘီရှည်လေး… ခရီးဆောင်အိတ်ကလည်း ရိုးရိုးတွန်းအိတ်လေး… နာမည်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ ထူးခြားတာက ရန်ကုန်မှာ လေယာဉ်ဆိုက်တော့ လမ်းလျှောက်တာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် တစ်အိတ်တောင် ပခုံးပေါ်ထမ်းသွားသေး။ ကျနော်လည်း…
မတိုးတက်သော မြို့၊ ရွာ၊ ရပ်ကွက် ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်း
မတိုးတက်သော မြို့၊ ရွာ၊ ရပ်ကွက် ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်း ၁။ လူတတ်ပေါ၍ ဆရာများခြင်း ၂။ လူကပ်ပေါ၍ ကန့်လန့်တိုက်ခြင်း ၃။ အမှားကို ဝန်မခံဘဲ အငြင်းသန်ခြင်း ၄။ မှန်တယ်ထင်၍ မတိုင်ပင်ဘဲ ရမ်းလုပ်ခြင်း ၅။ အလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှ တွက်ကပ်ခြင်း ၆။ ဗဟုသုတ၊စာဖတ်အား နည်းပါး ခြင်း ၇။ ကိုယ်တိုင် ဦးမဆောင်နိုင်ဘဲ သူတစ်ပါးကို အပြစ်ပြောခြင်း…
ဖခင် တစ်ယောက်ဟာ သူမသေခင်လေးမှာ သူ့သားကို ခေါ်ပြီးတော့ ‌ပြောတယ် “ဒါက သားအဖိုး ရဲ့ အဘေး ရဲ့ အဖိုး လက်ထက်ကတည်းက လက်ဆင့်ကမ်းထိမ်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့နာရီ ပဲ သူ့သက်တမ်းက နှစ် ၂၀၀ လောက်ရှိနေ ပြီ သား လမ်းထိပ်က နာရီဆိုင်မှာ ရောင်းဈေး သွားမေးလာ ကြည့် သူတို့ဘယ်လောက်ဈေး ဖြတ်ပေးမလဲဆိုတာ” သားဖြစ်သူဟာ နာရီကိုင်ထွက်သွားပြီး ခဏနေတော့ ပြန်ရောက်လာတယ်…
အိမ်ဆောက်ရင် သိထားရမယ့် လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ သစ်ဆက်နည်းအကြောင်း အိမ်တအိမ်မှာ စီးပွားပျက်ပြီး လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ ပင်လယ်ကူးသစ် လို့ခေါ်တဲ့ အကြောင်း အဲ့ဒါ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ပင်လယ်ကူးလို့ခေါ်တယ်… အလွန် ခိုက်ပါတယ်.. အဲ့အိမ်မှာ နေသူများ စီးပွားမဖြစ်တတ်ဘူး။ လူသေသည် အထိအောင် ဒုက္ခ ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ သစ် ကို ဆက်တဲ့နေရာဟာ တိုင်ရှိရင် ဆက်လို့ ရပါတယ်။ တိုင်မရှိပဲ…
မြွေတွေကို အိပ်မက် မြင်မက်တဲ့အခါ ဘာဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာ
မြွေတွေကို အိပ်မက် မြင်မက်တဲ့အခါ ဘာဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာ ၁။ မြွေကို ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေက ကိုယ့်ကို ကိုက်တော့မယ့်ပုံစံ၊ ပေါက်တော့မယ့် ပုံစံနဲ့ လိုက်လာလို့ ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးရတယ်လို့ အိပ်မက် မြင်မက်တယ်ဆိုရင် သင့်ထံသို့ ကံမကောင်းတဲ့ ကိစ္စရပ် တစ်ခု မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာလို့ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ မြွေနဲ့ တရင်းတနှီး ကစားနေရတယ်လို့ မြင်မက်လျှင် သင်ဟာ…
ပြိတ္တာတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ မိသားစု လေးယောက် လူတွေဟာ အများအားဖြင့် အကျိန်အဆို ဝါသနာပါကြတယ်။ မိမိပြောတာကို တစ်ဖက်သား ယုံအောင် ပုံဆောင်တဲ့အနေနဲ့ ကျိန်ဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိကြတယ်။ “ဘုရားစူးရစေရဲ့ ၊ မိုးကြိုးပစ်ခံရပါစေရဲ့ ၊ မြွေပွေးကိုက်ခံရပါစေရဲ့ စသဖြင့်ပေါ့။ မိမိကသာ ကျိန်ဆိုရုံမျှမက သူတစ်ပါးကိုလည်း နင်ဘုရားစူး ၊ မိုးကြိုးပစ် ၊ မြွေပွေးကိုက်လို့လည်း ကျိန်ဆို ခိုင်းပါသေးသည်။ မိမိအလုပ်ရပ်က ဟုတ်နေလို့…
ထီပေါက်ရင် ဆုငွေ ထုတ်ယူနည်း
ထီပေါက်ရင် ဆုငွေ ထုတ်ယူနည်း ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇ လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ်။ ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့ 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ ပုံဆိုရပါတယ်) အပေါ်က အချက်အလက်များကို ယူသွားရပါမယ်။…
မြန်မာ အမျိုးသမီး အများစု လွဲမှားနေသော ဆံပင်အလှူ (မေး) အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်မသည် ဆံပင်ရှည်များကို ဘုရားမှာ လှူမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး အရှည်ထားပါသည်။ ယခု ဆံပင်ရှည်၍ ဖြတ်ပြီး လှူမည်လုပ်ရာ အချို့က ဆံပင်အတိုင်း မလှူကောင်း ရောင်း၍ သို့မဟုတ် ဘုန်းကြီးသုံး ယပ်လုပ်၍ လှူရသည်ဟု ပြောပါသည်။ မည်သို့ လှူသင့်သည်ကို ဖြေကြားပေးပါရန် လျှောက်ထားပါသည် ဘုရား။ (ဖြေ)…
ကြီးပွား ချမ်းသာဖို့ အာစိဏ္ဏကံ ကုသိုလ်ဆိုတာ ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ရဲ့လား။ သောက်တော်ရေရောနေ့စဉ်ကပ်ဖြစ်ရဲ့လား။ဘုရားပန်းလည်း အပတ်စဉ်လှူဖြစ်ရဲ့လား။ အဲ့လို့နေ့စဉ်လုပ်ရင် …ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတာလို့ ခေါ်တယ်။ မကြာခင် ကြီးပွါးတော့မယ့် လက္ခဏာပဲ။ သေချာမှတ်ထား၊ လောကမှာ အကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်၊ ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်လို့ လူနှစ်မျိုးရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ အကုသိုလ်ဘက်မှာ စွဲသွားပြီဆိုရင် အဲဒီလူဟာ မကြာခင် မွဲသွားတတ်တော့တာပဲ။ တွေ့ဖူးတယ်မလား၊ အရက်သေစာသောက်စားမှုကို စွဲသွားတဲ့သူတွေ၊ မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ စွဲလမ်းသွားတဲ့သူတွေကိုလေ။…
ထမင်းစားပွဲဝိုင်းမှာ ယင်ကောင် မလာအောင် လုပ်နည်း
အားအင် ကုန်ခမ်းပြီး အိပ်ရေးမဝသလို မူးဝေသလို ဖြစ်နေသူများအတွက် ဆေးနည်း